स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सहज छैन कोरोना परीक्षण, निर्देशक भन्छन् सर्वसाधारणको गरूँ की, साथीको ? – Health Post Nepal
स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सहज छैन कोरोना परीक्षण, निर्देशक भन्छन् सर्वसाधारणको गरूँ की, साथीको ?
२०७७ साउन ३० गते १५:४८
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यतिबेला कोरोना परीक्षणका लागि सर्वसाधारण मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको पनि उत्तिकै भीड लाग्ने गरेको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमित उपचारको फन्टलाइन (अग्रपंक्ति) मा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य रुपमा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्न निर्देशन दिएसँगै अस्पतालमा थप चाप बढेको हो।
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी आफू सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणसँग लडेर काम आए पनि केही अस्पतालले अझै पनि जिम्मेवारीको बोध नगरेको आरोप लगाउँछन्।
‘मन्त्रालयले निर्देशनसँगै स्वाब परीक्षणका लागि दैनिक सयौं स्वास्थ्यकर्मीको फोन आउने गरेको छ,’ डा. राजभण्डारीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘संक्रमितको उपचारमा ध्यान दिऊ कि परीक्षणमा?’
उनी सरकारको पछिल्लो निर्देशनप्रति असन्तुष्ट छन्। ‘सरकार निर्देशन मात्र दिन्छ। अस्पताल उपचार गर्न ठाउँ हो, परीक्षण गर्न त होइन नि? टेकुको ल्याबले सर्वसाधारणदेखि स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्न धान्न सक्छ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
हाल अस्पतालमा परीक्षणका लागि १ हजारभन्दा बढी लाइनमा बस्ने गरेका छन्। तर, सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम मुस्किलले ४ सय जना परीक्षणको दायरामा आउँछन्।
आर्थिक हिसावले सम्पन्न भएकाहरू निजी प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गर्दै आएका छन्। टेकु अस्पताल विपन्नको भरोसा बन्न पुगेको छ। ‘चिनजानका साथीभाईको सयौँ संख्या फोन आइररहेको हुन्छ,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘उपचार तथा परीक्षण गर्न पनि अगाडि सर्नुपर्ने।’
फोन आए जतिका लागि डा. राजभण्डारीको जवाफ एउटै हुन्छ, हामीसँग परीक्षण गर्न क्षमता कम छ। मन्त्रालयसँग थप समवन्य गर्नुहोस्। स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षणको लागि हब अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ।
काठमाडौं उपत्यकाभर ६ वटा हब अस्पताल छन्। हब मातहात रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक अस्पताल स्टालाइटका रुपमा छन्। जबकि टेकु अस्पताल स्टालाइट अस्पतालको रुपमा छ।
हब अस्पतालको मातहतमा रहेका स्टालाइट अस्पतालमा रहेका फन्टलाइनमा रही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए।
‘मातहतमा रहेका स्टालाइट अस्पतालले संक्रमित राखेको छ कि छैन, फन्टलाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘हब अस्पतालले नै स्वास्थ्यकर्मीको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्ने हो।’
कोरोना संक्रमितसँग सम्बिन्धत केस नहेर्ने तथा फन्टलाइनमा बसेर काम नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण नहुने डा. अधिकारीले बताए।